पर्सा घटना :न्ययिक निरुपण कसरी ? «
दसैंको मुखमा पर्सामा सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थानीय नेता मुकेश चौरसियाको निधन भयो । उनको निधनले नेकपाको आन्तरिक राजनीति तरंगित बन्यो । साविक माओवादीतर्फका चौरसियालाई साविक एमालेतर्फले कुटेर मारेको आरोप लाग्दै आयो । नहुनुपर्ने घटना घट्यो । घटना घटेपछि पीडित पक्षले न्यायिक निरूपणका लागि प्रहरी प्रशासन गुहारे । तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले भने उक्त घटनाको विरुद्धमा जाहेरी लिन बिहीबारसम्म मानेन । अन्ततः उक्त हत्या प्रकरणका आरोपीविरुद्ध पीडित पक्षले नेकपाकै नेता राजकुमार गुप्तासहित १२ जनामाथि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरेको नेकपा पर्साका इन्चार्ज रामचन्द्र साहले जानकारी दिएका छन् । घटनाको एक सातापछि वकिल कार्यालयमा मुद्दा दर्ता भएको हो । वकिल कार्यालयले भने मुद्दा दर्ता गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
विन्दवासिनी गाउँपालिकामा भएको पार्टीको शपथ कार्यक्रममा दुई पक्षबीच झडप हुँदा घाइते भएका चौरसियाको उपचारका क्रममा निधन भएको थियो । यस घटनाका आरोपीलाई कारबाही गर्न नेकपाका ३७ केन्द्रीय सदस्यले माग गरेका थिए । स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवसहित दुई नम्बर प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३७ केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गर्दै वक्तव्य नै निकालेका थिए, जसमा सहइन्चार्ज विश्वनाथ शाह, नागेन्द्रप्रसाद चौधरी र महेन्द्र पासवान एवम् केन्द्रीय सदस्यहरूमा रामचन्द्र झा, शत्रुघ्नप्रसाद महतो, योगकुमार बरबरिया, श्रीप्रसाद साह छन् । यसैगरी यदुवंश झा, सुधीरप्रसाद साह, अजयशङ्कर नायक, राजु खड्का, बोधमाया यादव, भरतप्रसाद साह, रामबहादुर यादव, प्रकाश पोखरेल, रामप्रित पासवान, दीर्घबहादुर योञ्जन, डाचाराज वाग्ले, रवीन्द्र बैठा, प्रह्लाद बुढाथोकी, हरिनारायण चौधरी, जगत यादव, गोपाल ठाकुर, रामचन्द्र यादव, रामकुमार शर्मा, दिनेश राई, रामचन्द्र साह, सरलाकुमारी यादव, कल्याणी खड्का, ममता गिरि, लक्ष्मण पौडेल, रत्नेश्वर गोइत, युवराज भट्टराई, अशोकुमार मण्डल, महादेव यादव, टेकबहादुर बलम्पाकीले विज्ञप्तिमा जारी गरेका थिए । तर वक्तव्यमा ओली पक्षका कुनै पनि केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरेनन् । “घटनाको प्रकृति हेर्दा पार्टीको गाउँपालिका कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू निर्विवाद थिए । शपथ ग्रहण हुनमात्र बाँकी थियो । शपथ ग्रहण कार्यक्रमको आयोजना भयो । कार्यक्रम सुरु हुनुअघि नै केही आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूको योजनामा अपराधीहरू बाँसका भाटालगायतका हतियारहरू बोकी कार्यक्रमस्थलमा पुगे । पार्टीको ब्यानर र झन्डा च्यात्न थाले । क. मुकेश चौरसियाले रोक्नुभयो । अपराधीहरूले उहाँलगायत उहाँसँगै रहेका निहत्था कमरेडहरूमाथि आक्रमण गरे,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “घटनाको प्रकृति हेर्दा सुनियोजित छ । उनीहरूले भनेका छन्, जाहेरी दर्ता नगर्नुले प्रहरीबाट कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको देखिन्छ ।”
जसको सत्ता छ, उसकै कार्यकर्ताहरूबीच भएको आपसी कुटपिटमा परेर अनाहकमा ज्यान गुमाउँदा समेत न्याय निरूपणको बाटो खोल्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै विपक्षी नेपाली कांग्रेस पार्टीदेखि अन्य दललगायत तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले समेत सरकारको चर्को आलोचना गरे । प्रहरीले जाहेरी लिन किन सकेन भन्ने प्रश्नले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । यसै सन्दर्भमा पर्सा घटनाको न्यायिक निरूपणको अबको बाटो कसरी अघि बढ्ला भन्ने सन्दर्भमा कारोबारले संकलन गरेको जनमतको प्रस्तुति :
प्रहरीलाई समेत कारबाही गर्नुपर्छ
पत्नी, स्वर्गीय मुकेश चौरसिया
मेरो पतिको हत्यारालाई उन्मुक्ति दिने पर्सा प्रहरीका अधिकारीलाई समेत कारबाही हुनुपर्छ । मेरा पतिले मलाई पार्टीको बैठकमा जाँदैछु, दिउँसो २ बजेसम्म आउँछु भन्नुभएको थियो । त्यस दिन घरबाट बिहान १० बजे उहाँ निस्कनुभएको थियो । तर, उहाँ कहिल्यै नफर्किने गरी जानुभयो ।
उहाँको हत्यामा पूर्वसभासद् राजकुमार गुप्ताको हात छ । किनकि गुप्ताको वीरगन्ज श्रीपुरस्थित निवासबाट हत्याका आरोपीहरू पक्राउ परेका छन् ।
वास्तविक हत्यारालाई कसैले बचाउन सक्दैन
अध्यक्ष, नेकपा, प्रदेश नम्बर २
पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिकामा विवादका कारण गाउँ कमिटी सचिव मुकेश चौरसियाको निधन भएको हो । प्रदेश कमिटीले कुनै पनि विवादित कार्यक्रम नगर्न भनेको थियो । तर, त्यसको ठीकविपरीत कार्यक्रम भयो । आफ्नै स्थानीय नेताले ज्यान गुमाउनुपर्दा मलाई निकै दुःख लागेको छ । पार्टी प्रदेश कमिटीले विवादित कार्यक्रम नगर्न निर्देश दिए पनि जबरजस्ती कार्यक्रम गरेकोमा मलाई दुःख लागेको छ ।
उहाँको हत्याको जाहेरी छिट्टै दर्ता हुन्छ । उहाँको वास्तविक हत्यारालाई कसैले बचाउन सक्दैन । पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण नेताले ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थिति आउनु दुःखद हो । कुनै पनि हालतमा अपराधी बच्न नसक्ने र कोही निर्दोषलाई फस्न दिइने छैन ।
जघन्य अपराधको विषयमा राज्य संवेदनहीन भएर प्रस्तुत हुन मिल्दैन । हत्यारा पानीमुनि गएर लुके पनि कसैले बचाउन सक्दैन । दुई–तीन दिनभित्र समाधान निस्कन्छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण त्यस्तो भएको हो भनिएको छ । हामी छलफलमा छौँ । राज्यले संवेदनशिलता बुझ्न आवश्यक छ ।